MNL 2013 Week (13) Results - Southern 0-4 YGNUTD, ZYSM 1-1 KBZ, Zwekapin 2-2 AUFC, YDNB 2-0 NPT, Magwe 2-1 RUFC, Manaw Myay 1-2 HUFC	Home
First Team 2013 2nd
First Team 2013 1st
First Team 2012
Reserve Team 2013
Reserve Team 2012
First Team 2013
Latest News : Updated on Aug 5, 2012
wunnazawThursday9August 2012, 5:11 amလက်မှတ် ၅၀၀ ပဲဝယ်လည်းဗျာ ဧည့်သည် အသင်း အတွက်တော နေရာကို့  တစ်ဝက်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါကလည်းသူတို့အပြောပါ။ နောက်မန်းလေးမှာ သွားကန်ရင် ရန်ကုန်ပရိတ်သတ်တွေ ပိုပြီးလိုက်သင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန်ပရိတ်သတ်တွေက အလကားခေါ်မှ မဟုတ်ပါဘူး။။ရတနာပုံက ပရိတ်သတ်တေါဆို အလကား မခေါ်တော့လို့လား မသိဘူး နောက် ပိုင်းအေ၀းကွင်း ပွဲတွေ လိုက်တောင်မလိုက်တော့ဘူး။ chinabigWednesday 8 August 2012, 3:56 amအနော်တို့ မှာ ဘယ်သူ့ ကိုစိတ်ဆိုးရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး .....ချေပဂိုးပြန်သွင်းတဲ့ အချိန်မှာ စိတ်ဓါတ်က အမြင့်ဆုံးရောက်သွားပြီ...အဲ့ အချိန် မှာ ရန်ကုန်ကိုဆဲနေတဲ့ ရတနာပုံ ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ တစ်ယောက်ထဲချမလားဆိုလဲ မကြောက်တော့ဘူး .....ချဖို့ အစဉ်သင့်ပဲ ..ရတနာပုံ ဖန်က သူငယ်ချင်းတွေကတော့ အရမ်းခင်ဖို့ ကောင်းပါတယ် .. .နောက်နောင်အဲ့လိုအဝေးကွင်းမှာ လက်မှတ်ဝယ်တာနည်းတယ်ဆိုပြီး ပရိတ်သတ်တွေရောထားတာမျိုးမဖြစ်အောင်တော့ကြီးကြပ်လုပ်ပေးသင့်တယ်လို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.. Champions YUFC chinabigWednesday 8 August 2012, 3:49 amဆိုတာကတော့ မကြားချင်မှအဆုံးပဲ... အဲ့ပင်နယ်တီ အပြီးမှာပဲ အနော်တို့ ကို ရေထုပ်တွေ ကွမ်းတံတွေးထုပ်တွေ ဇီးစေ့ တွေ နဲ့ အားပေးကြတာဗျာ....နည်းတာမဟုတ်ဖူး...ရဲတွေကလဲ ဘောပွဲငတ်နေရှာတယ်ထင်ပါတယ် အပေါ်မှာ နည်းနည်း အောက်မှာသံဇကာလေးတွေ ကိုင်ပြီးအားပေးနေကြတာနည်းတာမဟုတ်ဖူး . ရန်ကုန်က ရဲတွေတောင်သနားမိတယ်.နောက်တော့ရတနာပုံက လူကြီး ၂ယောက်ရောက်လာတယ် အနော်လဲ စပ်စုတာပေါ့ ဦးလေး ဘာလို့ အဲလို ပရိတ်သတ်တွေရောထားလဲဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့ ရန်ကုန်က လက်မှတ်အစောင်၂၅၀၀ ကို ပိုက်ဆံ ၁၅၀၀ နဲ့ ရောင်းတာကို ၅၀၀ ပဲဝယ်လို့ တဲ့ ..ကြေကွဲပါတယ်ဗျာ
chinabigWednesday 8 August 2012, 2:57 amပထမတော့ သူတို့ ဖက်က လူများလို့ နဲနဲရှိန်ပြီး ငြိမ်ငြိမ်လေးနေပေးတယ်.. သည်းခံတယ်..ကိုယ်ဖက်မှာလဲ ကလေးတွေ .. အမေကြီးတွေ..မိန်းကလေးတွေ..နဲ့ ဆိုတော့ပေါ့ . .ပွဲစတော့ တစ်ဖြေးဖြေးနဲ့ လွန်းလာတယ်.. ပထမ ရန်ကုန်လို့ အော်အားပေးရင် xီး ပဲဆိုတဲ့အသံကြီးက ဟိန်းထွက်လာတယ်. .ပြန်ငြိမ်နေတယ်.. ဒါပေမဲ့ရန်ပိုင်ပင်နယ်တီကို နိုင်ကြီး ပုတ်ထုတ်လိုက်တော့.. လွတ်သွားတယ်.၀မ်းသာသွားတာကိုဗျ .. အဲမှာဗျာVIP ဖက်က ရွှေမန်းသူတွေက “ထ က“ တဲ့ ကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်း ၂ ယောက်ကို ဖေxီုးမသားနဲ့ တုတ်တာဗျာအားရပါရပဲ. .ေxာက်ရူးတွေဆိုတာကတော့ wunnazawTuesday7August 2012, 10:18 pmရတနာပုံက ရဲတွေက အရမ်းကို အားနည်းပါတယ်။ ရန်ကုန်ပရိတ်သတ်တွေကြားထဲကို ရတနာနာပုံပရိတ်သတ်တွေ ရောလာတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ရဲကိုခေါ်ပြီးပြောတာတောင် ဘာ Action မှယူမပေးဘူး..ဘောပွဲသာကြည့်နေရတာဘယ်အချိန်ကိမ်းတံတွေးနဲ့ပေါက်မလဲ.ဘယ်ချိန်ဝိုင်းရိုက်ခံရမလဲပဲပူနေရတယ်..အဆိုးဆုံးကတော့ VIPတန်းမှာကြည့်တဲ့ရတနာပုံမိန်းမတွေပဲ.အဆင့်အတန်းကိုမရှိဘူး..ဒီဘက်က ရန်ကုန်ပရိတ်သတ်တွေကိုလှမ်းပြီးဆဲနေကြတာကြားလို့တောင်မကောင်းဘူး။ရန်ကုန်က ဂိုးလည်းသွင်းလိုက်ရော အရိုင်းအစိုင်းမန်းလေးသားတွေငြိမ်ကျသွားတာပဲ... ချန်ပီယံဆုကို ဆက်ထိန်းပေးပါ။
kaung myat thuTuesday7August 2012, 5:48 amရန်ကုန်မှာ အိမ်ကွင်းဆိုတာ အစကတည်းက အမည်ခံသက်သက်ပဲလေ ။ ပြိုင်ဘက်ကိုအမြဲတမ်း ကွင်းတစ်ဝက်တိတိ နေရာပေးထားမှတော့ အိမ်ကွင်းဘယ်ဟုတ်တော့မလဲဗျာ သုဝဏဟာ ကျွန်တော့်အမြင်တော့ ကြားကွင်းပါ ။ hanlintunnTuesday7August 2012, 3:27 amကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ကွင်းထဲထိလိုက်ကြည့်ဖို့နေနေသာသာ..တီဗီကတောင်ကြည့်လို့မရတဲ့အနေအထားပါ။။ဖေ့ဘုတ်ကတင်သမျှသတင်းလေးကိုနားထောင်နေရတာပါတစ်ချိန်လုံးရန်ပိုင်ကြောင့်တစ်ထိတ်ထိတ်နဲ့ ရန်ကုန်လုပ်ထားကွလို့ ကြိတ်ဆုတောင်းနေရတာပါ....နီးလာလေ ရင်ခုန်လေပါပဲ... တင်တဲ့သူကနောက်ကျတာဖြစ်မှာ ငါတို့ဂိုးရနေပြီ.... အဲလိုဖြေတွေးရတာလည်းခဏခဏပေါ့......မိနစ်ကိုးဆယ်မှ ဂိုးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ဆိုတဲ့စာတန်းကိုတွေ့မှ ဟာရန်ကုန်ပြန်သွင်းပြီလို့ပျော်ခဲ့တာပါ..နောက်ပွဲတွေက ရတနာပုံက ပိုပွဲစဉ်ကျပ်တယ်ဆိုတော့.....ရန်ကုန်ဖလားပဲပေါ့ဗျာ
great lionMonday6August 2012, 9:54 amအနဲစုသာဖြစ်သည့် ရန်ကုန်ပရိတ်သက်တွေရဲ့ကြားထဲ ရတနာပုံပရိတ်သက်တွေကို ရေးနှောထားတာဟာ ပွဲစီစဉ်သူတွေရဲ့ အတော်အသုံးမကျသည့် (ကန်တော့ပါရဲ့ဗျာ .. ရိုင်းတယ်လို့ထင်ရင်လည်း ကိစ္စမရှိပါဘူး .. အောက်မှာ ရေးထားသည့် အရာအားလုံးအတွက် ကြိုပြီး ပြောထားတာ ) လုပ်ရပ်တစ်ခုပါ ။မန္တလေးက ရဲတွေဆိုတာ မြင်ဖူးသမျှရဲတွေထဲမှာတော့ စောက်သုံးမကျဆုံး ရဲတွေပါပဲ ။ ငုတ်တုတ်မှ ငုတ်တုတ် ကျောက်ရုပ်နဲ့ နင်လားငါလားအောက်မေ့ရတဲ့ ရဲတွေဆိုတာ ကျွန်တော်လည်း ကြုံဖူးလို့ သိရပြီးပါပြီ ။ ကွင်းထဲမှာ ရဲတွေအနေဖြင့် ဘယ်လိုပြုမှုကျင့်ကြံသင့်သလဲဆိုတာကို ရန်ကုန်ကိုခေါ်ပြီး တစ်ခေါက်လောက် သင်တန်းပေးရမယ့်ပုံပါပဲ ။ အကြိတ်အနယ်ရှိပြီး ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်သည့် ပွဲတွေဆိုရင် ရန်ကုန်က ရဲတွေ ဘယ်လို ပြုမှုကျင့်ကြံကြသလဲဆိုတာကို စောက်သုံးမကျသည့် မန္တလေးက ကျောက်ရုပ်ရဲတွေကို ပြပေးရမယ့်ပုံ ။ ပရိတ်သက်နှစ်ဘက် ခုလို ရောနှောထားမှတော့ အနဲစုသာဖြစ်သည့် ဧည့်သည်ပရိတ်သက်ကို ပါးစပ်ဖြင့် (ဆဲနည်းမျိုးစုံ) အနီးကပ်စော်ကားမှုပြုမယ်ဆိုတာဟာ သိကို သိနေရမယ့် အဖြစ်ပါ ။ အခုလို အနီးကပ်ရှိနေမှတော့ ကွမ်းတံတွေးထုတ် ၊ ဆီးသီးစေ့တွေဖြင့် ပစ်ပေါက်စော်ကားကြတာ အဆန်းမှ မဟုတ်တာ ။ အတော်လေးကို စောက်သုံးမကျလွန်းသည့် စီစဉ်သူတွေ တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုပဲ ။ မိန်းကလေးတွေနှင့် ကလေးတွေပါ ပါဝင်တတ်တယ်ဆိုတာ ခုလက်ရှိ ဘောလုံးပွဲတွေရဲ့ သဘာဝတစ်ခုလိုပါ ။ ရတနာပုံပရိတ်သက်တွေ များလွန်းအားကြီးလို့ ဧည့်သည်ပရိတ်သက်ထဲ ထိုးသွတ်သွင်းတယ်ဆိုတာ ဖြစ်ကို ဖြစ်ရမယ့် အရာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး ။ အိမ်ရှင် ပရိတ်သက်တွေ များလွန်းအားကြီးလို့ကွင်းမဆန့်တော့လို့ဆိုရင်လည်း ကွင်းထဲကို အ၀င် ခံကို မခံသင့်ပါဘူး ။ ဥပေက္ခာ ပြုကို ပြုရမယ့်အရာတစ်ခုပါ ။ ဒီလောက်တောင် မတွေးတတ်ကြဘူလားဗျာ ။ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့လို့ တော်သေးတာပေါ့ ။ တစ်ခုခုများ သွေးထွက်သံယိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီပွဲရဲ့ စီစဉ်သူတာဝန်ရှိသူတွေကို မေးကြည့်ချင်ပါတယ် ။ ခင်ဗျားတို့တွေ တစ်ခုခု တာဝန်ယူနိုင်ကြလို့လား ။ ခင်ဗျားတို့တွေ လုပ်ချင်သလို ပေါက်ကရတွေလျှောက်လုပ်ပြီး ခေါင်းမရှိသလို လုပ်နေကြတဲ့ ရလာဒ်တစ်ခုအတွက် တာဝန်အပြည့်ယူနိုင်ကြပါသလား ။စာတွေ ဖတ်ရလေ လူကို ဒေါသတွေ ထွက်လေပဲ ။ စောက်သုံးကို နဲနဲလေးမှ မကျတဲ့ ကောင်တွေလုပ်သမျှ ဖြူစင်အပြစ်ကင်းသည့် ပရိတ်သက်တွေ စတေးရဦးမှာလား ။ မန္တလေးထိ လိုက်ပါအားပေးခဲ့ကြသည့် ရန်ကုန်ချစ်သူ မိသားစုများအားလုံးကို ဒီနေရာနေပဲ ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ် ။We Are YUFCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
great lionMonday6August 2012, 9:47 amအနဲစုသာဖြစ်သည့် ရန်ကုန်ပရိတ်သက်တွေရဲ့ကြားထဲ ရတနာပုံပရိတ်သက်တွေကို ရေးနှောထားတာဟာ ပွဲစီစဉ်သူတွေရဲ့ အတော်စောက်သုံးမကျသည့် (ကန်တော့ပါရဲ့ဗျာ .. ရိုင်းတယ်လို့ထင်ရင်လည်း ကိစ္စမရှိပါဘူး .. အောက်မှာ ရေးထားသည့် အရာအားလုံးအတွက် ကြိုပြီး ပြောထားတာ ) လုပ်ရပ်တစ်ခုပါ ။မန္တလေးက ရဲတွေဆိုတာ မြင်ဖူးသမျှရဲတွေထဲမှာတော့ စောက်သုံးမကျဆုံး ရဲတွေပါပဲ ။ ငုတ်တုတ်မှ ငုတ်တုတ် ကျောက်ရုပ်နဲ့ နင်လားငါလားအောက်မေ့ရတဲ့ ရဲတွေဆိုတာ ကျွန်တော်လည်း ကြုံဖူးလို့ သိရပြီးပါပြီ ။ ကွင်းထဲမှာ ရဲတွေအနေဖြင့် ဘယ်လိုပြုမှုကျင့်ကြံသင့်သလဲဆိုတာ
boboaungMonday6August 2012, 3:24 amယဉ်ကျေးလှသောမြို့ တံတိုင်းတိုင်းရဲ့ သားသတ်ကွင်းဆီသို့ အလည်တခေါက်--------------------------------------အစ်ကိုေ၇.. မနေ့ ကပွဲကတော့ ပြောစ၇ာတွေအများကြီးကိုကျန်ခဲ့ ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဟာဗထူးကွင်းကိုအကြိမ်များစွာလာေ၇ာက်အားပေးခဲ့ ဘူးပါတယ်.. ဒီတခေါက်ကတော့ ဗျာ..ကွင်းထဲကိုစေ၇ာက်ကထဲကကျွန်တော်တို့ သတိပြုမိပါတယ်.. လူနေ၇ာချပေးထားပုံတွေကလေ.. ကျွန်တော်တို့ နဲ့ သူတို့ ကြားမှာ၇ဲကတော့၆ ယောက်လောက်ဘဲရှိပါတယ်။ အသက်အန္တ၇ာယ်ကိုပါစိုး၇ိမ်၇ပါတယ်.. လူချထားပေးပုံကတော့ အဆင် မပြေပါဘူး.. ကျွန်တော်တို့ ၇န်ကုန်ပ၇ိတ်သတ်တွေဟာ. ၇တနာပုံရဲ့ ပ၇ိတ်သတ် ၂ ဘက်ကြားမှာကြေ၇ာက်နေပါတယ်... ကျွန်တော်တို့ တွေဟာလူအ၇မ်းနည်းပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာ.. ဇီးသီးတွေနဲ့ ပေါက်တာကော..ကွမ်းထုတ်တွေနဲ့ ပစ်တာကောခံ၇ပါတယ် ကျွန်တော်လဲစိုး၇ိမ်ပါတယ်.. ဘယ်အချိန်များငါတို့ တွေကိုဝင်ရိုက်မလဲဆိုတာကိုပါ။ဆဲဆိုနေတာတွေကော..ကိုယ်လက်အမူ၇ာတွေကော..ပြောမနေပါနဲ့ တော့ ..။ အဲ လုံခြုံရေးများကတော့ ဘောလုံးပွဲတွေကိုတော့ တောတောကြိုက်ပုံ၇တယ်။ ကျွန်တော်တို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာတာဝန်ရှိသူတွေကို မနည်းပြောနေ၇ပါတယ်ဗျာ..၇န်ကုန်မှာတော့ဒါမျိုးတွေလုပ်လို့ တောင်မ၇ပါဘူး..ကျွန်တော်သိချင်တာကဘာလို့ များ.. ဒီလိုပ၇ိတ်သတ် ၂ ခုကို၇ဲဘဲခြားပီးေ၇ာထား၇တာလဲ.. သူတို့ ကလူအများစုပါ..ပြီးတော့ လဲရိုးရိုးတန်းကိုတံခါးပါဖွင့် ပေးလိုက်သေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လဲဘောလုံးပွဲတောင်ကောင်း ကောင်းမကြည့် ၇ပါဘူး. တချို့ ဂိုးတွေတောင်ဘယ်လိုသွင်းသွားသလဲဆိုတာတောင် မသိပါဘူး...vip တန်းလဲသတ်သတ်ဆီခွဲမခြားဘူးနော်.. ဒီတခေါက်ကတော့ တကယ်ကိုဖြစ်ကလက်ဆန်းကိုနိင်ပါတယ်..ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ တွေရဲ့ ၇န်ကုန်အမာခံ ပ၇ိတ်သတ်များစွာကိုမခေါ်နိင်တာကလဲ တကယ်ကိုအားနည်း၇ပါတယ်။ ခုလာေ၇ာက်လာတဲ့ ပ၇ိတ်သတ် အများစုဟာမိန်းကလေးတွေနဲ့ ကလေးတွေအများကြီးပါပါတယ်ဗျာ.. အားလုံးအား ၇န်ကုန်ကိုချစ်တဲ့ သူတွေဘဲလေ.. ဒါတွေဟာအဆိုးတွေပေါ့ .. အကောင်းတွေလဲရှိပါသေးတယ်.. ကျွန်တော်တို့ နဲ့ ချစ်ကြည်၇င်းနီးတဲ့ ၇တနာပုံဖန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ေ၇ာက်တာနဲ့လက်ဖက်၇ည်ဆိုင်မှာလာေ၇ာက်ကြိုဆိုသလို..ဘု၇ားကြီးကိုလဲအတူ ဖူးမြော်ခဲ့ ပါတယ်..နောက်ပီးတောင်သဗ္ဗန်အင်း.. ဦးပိန်တံတားမှာလဲအတူတကွချစ်ကြည်စွာလည်ပတ်ခဲ့ သလို..ဓါတ်ပုံတွေလဲရိုက်ခဲ့ပါတယ်..ပြီးတော့ ၇န်ကုန်ဖန်ဘောလုံးအသင်းကလဲ ၇တနာပုံဖန်နဲ့ချစ်ကြည်ေ၇းတွေဘောလုံးကန်ခဲ့ ပါတယ်ဆိုတာပါဘဲ. အဝေးကွင်းလုံခြုံေ၇း အပိုင်းတွေကိုသေချာစွာပြုပြင်းပေးပါလို့၇န်ကုန်ဝါ၇ီယာတွေကလေးစားစွာတောင်ဆိုပါတယ်ဗျာ.
boboaungMonday6August 2012, 3:23 am
Yangon face second draw match
YANGON UNITED FOOTBALL CLUB © 2009
Home | The YUFC | Fanzone | Collector's Shop | Contact